1.Yenziwe ngerabha ekumgangatho ophezulu kunye ne-EVA, ayiqulathanga zinto zenziwe ngeplastiki, inokuphinda isetyenziswe, ilula, ayinaphunga, kwaye inobuhlobo kwindalo.
2. Ubume obuthambileyo, ukuthamba, ukolula okuhle, ukomelela okuhle, ukuqinisa kunye nokufunxa.
3. Uyilo lweepateni zomhlaba lunokunyusa ngokufanelekileyo ukungqubana komphezulu kunye nokudlala isiphumo esihle sokulwa nesiliphu.
4. Uyilo loyilo ngasemva, ukubambelela ngokuqinileyo, kunye nomphetho wengubo ethe tyaba awuyi kuphakamisa.
5. Ngokudibana kolusu lomntu okubalaseleyo, kunokuthintela ngokufanelekileyo ukubanda emhlabeni, ukunciphisa iintlungu zonxibelelwano phakathi komzimba kunye nomhlaba ngexesha lokuzilolonga, kunye nokunciphisa ukwenzakala kwezemidlalo.
6. Imibala eyahlukeneyo, intle kwaye inesisa.
7. Kulula ukuyicoca, kulula ukuyibeka, ubunzima bokukhanya, ubungakanani obuncinci, kulula ukuyiphatha.
Iimveliso zisetyenziselwa ikakhulu ukuziqhelanisa neyoga yemihla ngemihla, uqeqesho lomzimba olwakha umzimba, njl.Imethi yeyoga eveliswe yinkampani yethu ithambile kwaye iyoluka, enokunciphisa ngempumelelo iintlungu zokunxibelelana nomhlaba. Lukhetho olufanelekileyo kumagcisa eyoga.
1. Beka amanzi acocekileyo kwisitya sokuhlambela, ugalele ulwelo lokuhlamba, kwaye unyanzele ngokulinganayo.
2. Beka itawuli kwisitya sokuhlambela usonge itawuli emva kokuba kumanzi.
3. Sula ukhuko ngetawuli ukucoca ubumdaka.
4. Faka isitya sokuhlambela ngamanzi acocekileyo, uhlambe itawuli, uphinde itawuli ecocekileyo amaxesha amaninzi ukuze ucime ulwelo lokuhlamba.
5. Xhoma umethi weyoga emthunzini ukuze wome.
Qaphela: Musa ukubeka elangeni.
Egqithileyo Umgangatho we-foam eva floor mat Umtya oqinileyo womgangatho we-foam
Okulandelayo: Imethi yabantwana yephazili, imethi yomgangatho wegwebu, ukuqiniswa komgangatho wokulala kumagumbi okulala, iimethi ezirhubuluzayo kunye nemethi yomgangatho
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, AMP Iselfowuni Umgangatho wePuzzle Mat Cushion, Umgangatho weMat Puzzle, Umgangatho wePuzzle yePuzzle, Umgangatho wePuzzle, Umgangatho wePuzzle wokuzilolonga iMat, Umgangatho wePuzzle wePuzzle, Zonke iiMveliso